I-China High polymer tpu bristles ibrashi yamazinyo ikhusela iintsini mveliso kunye nabenzi | Enyuan
I-Polymer tpu ibristles ibhrashi yamazinyo ikhusela iintsini
Ibhrashi yamazinyo ye-tpu eyenziwe sisizukulwana esitsha see-polymer bristles kunye netekhnoloji yokubumba eyahlukileyo. Iibristles zinencam ejikeleziweyo kunye nokucofa okuthambileyo. Ikhathalela iintsini kwaye izisa amava okuxubha kakuhle.
Igama lemveliso I-Polymer tpu ibristles ibhrashi yamazinyo
Izinto zeBristle TPU ibristles
Ububanzi bebrashi 0.20mm
Amagqabantshintshi ebhulashi yethu yamazinyo ye-tpu enziwe ngee-bristles zesahlulo senxalenye, zidityaniswe netekhnoloji yokubumba eyahlukileyo, i-bristles igudile kwaye ithambile ukubamba, inika indawo yomlomo ukuba izive ngathi i-spa. Uyilo olupheleleyo lutsha kwaye lulula, lukhululekile kwaye lunesisa
Ngaba ibhrashi yamazinyo ethambileyo inokucoca amazinyo?
Uhlalutyo: Ukuba ibrashi yamazinyo ithambe kakhulu, akunakwenzeka ukuba icocwe, kodwa ukuba ibristles inzima kakhulu, iya kubangela ukonakala gum ngokulula. Ngokukodwa, ukhetho lwebrashi yamazinyo kufuneka lusekwe kwimeko nganye. Ngokubanzi, abaguli abanesifo se-periodontal kufuneka bakhethe ibrashi yamazinyo ethambileyo, ekulungeleyo ukucoca i-periodontal, ngelixa abo bangenaso isifo se-periodontal banokukhetha ibrashi yamazinyo ngobulukhuni obulinganiselweyo.
Ubuninzi be-molecular nano-filament:
i-polymer bristles, i-filaments ethambileyo, inceda ukucoca umphezulu wamazinyo, buyisela amazinyo angamakhulu amabini oqobo, gcina umlomo ucocekile kwaye usempilweni
Isibambi esingatyibilikiyo se-ergonomic:
Uyilo lokuphatha ibrashi olungahambi kakuhle, ngokuhambelana ne-ergonomics, ukubambelela okukuko kunye nokusebenza ngokulula
Indawo yokubamba ibrashi efanelekileyo
Uyilo olulula, ngenisa imfashini ebomini, kwaye kwangaxeshanye uncede ubhetyebhetye amandla omxuku wokukhusela ukuthintela amandla agqithisileyo ekonakaliseni iintsini.
Okulandelayo: Ibhulashi yamazinyo ethambileyo enentloko eninzi